: डा. युवराज सँग्रौला – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/: डा. युवराज सँग्रौला
४) सीमानामा प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भएपछि, प्रोपोगन्डा वारमा भारत लागेको छ । भाततीय संचार माध्यम ट्र्म्पको रणनीतिलाई चीनका बि’रुद्ध प्रयोग गर्दैछन। भारतले एसियासँग बस्न सिकेन भने, उस्को दुर्दशा हुने छ। भित्र पसेर दुनियाँ बुझ्नु आवश्यक छ ।
भारत अमेरिकी चालको गोटि बनेको छ नेपालमाथि पश्चिमी रणनीति र तिब्बती मु’द्दालाई उठाउन चीनलाई बि’बादमा ल्याउने रणनीतिको राम्रो हुँदै छ । तर भारतीय रबैया यही हो भने अब यस्कावि’रुद्ध ल’ड्नुपर्ने हुन्छ एनजीओ चलाएर बसेकालाई यस घट’नाले किन छोएन ? यसैबाट थाह हुँदैन र भारत एक्लै नेपालमाथि प्र’हार गरि रहेको छैन । आँट पुग्छ, भने भारतले नाकाब’न्दी गरोस् ।
हामीले अब स्वतन्त्र बाँच्न सिक्नै पर्छ ।